Home » ဂျော့ဘ် » ဘာသာစကားနှစ်မျိုးစပိန် Transcriptionists
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: ဘာသာစကားနှစ်မျိုးစပိန် Transcriptionists
ဗီဒီယိုအားကူးရေး၏တစ်မိနစ်လျှင် $ 1.10
Daily Transcription isatranscription services company seeking bilingual transcribers fluent in English နှင့်
ကြောင့်စပိန်ကူးယူမှတ်တမ်းတင် / ဘာသာပြန်စာပေများအတွက်လုပ်ငန်းအသွားအလာအခါအားလျော်စွာကြီးမားသောပမာဏသာရှိလာဆိုတဲ့အချက်ကိုရန်, ငါတို့သည်သင်တို့ကို ယူ. ဖြတ်သန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စပိန်စမ်းသပ်ခြင်းဒါပေမယ့်အဖြစ်လည်းအင်္ဂလိပ်စမ်းသပ်ခြင်းကို ယူ. သွားမသာနိုင်စွမ်းရှိသည်လိုအပ်သည်။
ကျနော်တို့ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်နားထောင်ရန်နှင့်အတိအကျဘာပြောပြီလျက်ရှိသည်အဘယ်အရာကိုဖေါ်ထုတ်နိုင်သူအရည်အချင်း, အရည်အသွေး Transcribe လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောစပီခွဲခြားနှင့်နောက်ခံဆူညံသံများနှင့်ထပ်ပြောဆိုမှုများနှင့်အတူဆိုပါတယ်လျက်ရှိသည်အဘယျသို့နားထောငျနိုငျရနျရန်စိတ်အားထက်သန်နားကိုလိုအပ်သည်။
ဒါကအလွတ်တန်းအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ hours ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကြသည်။ လိုအပ် 98% တိကျမှန်ကန်မှု။ အကြှနျုပျတို့သညျကိုအမေရိကန်သို့မဟုတ်ကနေဒါတွင်နေထိုင်ကြောင်းပိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်။
Audio / Video Transcribe ၏တစ်မိနစ်လျှင်စပိန်ကူးယူ $ 1.10 မှစပိန်
စပိန်ဘာသာပြန်ချက်စကားလုံးနှုန်း5ဆင့်
စပိန်ကနေအင်္ဂလိပ်တိုက်ရိုက် - ကူးယူ - Audio / Video Transcribe ၏တစ်မိနစ်လျှင် $ 1.50 ချေ
အလွတ်တန်းဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် / Editor ကို - သြဂုတ်လ 19, 2019
ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက် - သြဂုတ်လ 19, 2019
ကုန်ပစ္စည်းအင်ဂျင်နီယာချုပ် - သြဂုတ်လ 19, 2019
ဆိုးကျိုးများအပြီး ဘာသာစကားနှစ်မျိုးစပိန် Transcriptionists ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ အသံလွှင့် photoshop ထုတ်လုပ်မှု TVU ကွန်ယက် ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်း	2019-05-15
ယခင်: Production Assistant (PA)
နောက်တစ်ခု: broadcast ကို Maintenance Engineer အ